Inona avy ireo fenitra SEO ho an'ny mpamorona tranonkala?
Mba hamoronana vohikala tsara tarehy dia mila mandinika ny fikarohana momba ny fikarohana ianao amin'ny web design sy ny fampivoarana hatramin'ny voalohany. Na izany aza, tsy izany foana no izy. Tokony ho fantatrao fa na dia tsara aza ny tranonkalanao ary manana endrika tonga lafatra, dia tsy hoeritreretin'ny mpanjifanao mety aminao izany, fa amin'ny alalan'ny fitaovam-pitadiavana tsy misy SEO. Amin'ny toe-javatra sasany, tsy misy tranonkala tsara kokoa noho ny fananana tranonkala mahantra izay mamela ireo mpitsidika manana traikefa ratsy ary manova ny sainy momba ny fikambanana.
Fikarohana fandaharam-pamokarana Search Engine dia dingana iray amin'ny famolavolana tranonkala iray izay manintona ny maso ary mora ihany koa ny mivezivezy. Tsy mety ny mieritreritra ny famoronana tranokala ahatsiarovan'ny loko sy ny sary ary ny tetika ihany. Tokony hijery ihany koa ny fomba hikarakaranao ny mpitsikilo sy ny fomba hivezivezin'ny mpampiasa azy. Ny tranokala momba ny tranokala dia mila namana. Izy io dia mikasika ny lafiny rehetra amin'ny code code HTML mba hifaneraserana sy bebe kokoa.
Ho an'ity lahatsoratra ity, dia hijery akaiky ny zavatra ilaina amin'ny fananganana lozisim-pikarohana ao anaty tranonkala.
Ny fenitra ambonin'ny SEO
Ny toro-làlana SEO manaraka dia mahasoa ho an'ireo mpandrindra eo am-piandohana sy eo am-piandohana mandritra ny ampahan'ny tranobe fananganana tranokala.
Tsara ny manatanteraka CSS fa tsy rafitra takelaka ho an'ny tranokala azo itokisana. Izany dia ahafahana manatsara ny singa votoaty ao anaty pejy iray.
Ampidino ny singa
Azo ampiasaina tsara ny fampiasana ireo sora-pohy lazaina fa matanjaka sy H tags amin'ny votoaty tsy miverimberina. Tsy tokony hampiasa tenin'ity karazana HTML ity ianao ao amin'ny sidebar, lohatenin'ny tranonkala, na karazan-drakitra hafa izay miseho amin'ny isa amin'ny tranonkala. Amin'ny fomba hafa, azonao ampiasaina divay ara-dalàna. Soritsoy ireo marika ho an'ny votoaty miavaka amin'ny pejy tsirairay.
Azonao atao ny manatanteraka sary CSS ho an'ny tranonkala stylistic rehetra. Na izany aza, ho an'ny singa votoaty hita ao anaty votoaty iray, mila mampiasa sarimihetsika sary mahazatra ianao. Ohatra, ho an'ny logos, tsara kokoa ny mampiasa sary maromaro fa tsy fanoloana lahatsoratra.
Ny mpikaroka web dia afaka manampy amin'ny tranokalam-pikarohana finday manasongadina ny endritsoratra masinina. Azo ekena ny fampiasana solosaina toy ny @ font-face na sary mba hampisehoana lahatsoratra. Raha tokony ampiasaina amin'ny CSS, ampidino ny sary amin'ny alim-bika amin'ny alim-boalaza izay mamerina ny votoatin'ny sary Source .